Taiwan: Maneho Hevitra Momba Ilay Diplaomaty Voaheloka Ho Nanararaotra Mpiasa An-trano Ireo Mpiondana Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Novambra 2011 11:17 GMT
Noho ireo mpanao lalàna mitavozavoza sy motraka, ary ny “sasany”- sa tokony hoe “ny maro” no ho teneniko – amin'ireo mpampiasa tsy vanon-toetra, malaza ratsy amin'ny fanaovana tsinontsinona ireo mpiasa vahiny mpila ravinahitra i Taiwan. Na izany aza, tamin'ity indray mitoraka ity ny tantara ratsy mahasadaikatra dia tsy tao Taiwan no nitranga, fa tao amin'ny toeram-ponenan'ny diplaomaty Taiwanais any Etazonia.
Ny lohateny lehibe tamin'ireo gazety malaza tao Taiwan androany dia momba an'i Hsien-Hsien Liu (劉珊珊),Tale jeneralin'ny Taipei Economic and Cultural Office (TECO) ao an-tanànan'i Kansas, voampanga ho manome karama vary masaka ny mpiasa an-tranony avy any Philippine, tsy famelàna azy hivezivezy malalaka ary fanerena azy hiasa 16 ka hatramin'ny 18 ora isanandro. Koa satria tsy manana fifandraisana ara-diplaomatika amin'ny fomba ofisialy amin'i Etazonia i Taiwan, Hsien-Hsien Liu no lasa toy ny diplaomaty ho azy fotsiny amin'izao misolo tena ny governemanta Taiwanais, amin'ny endrika tsy ofisialy
Ny ankamaroan'ireo famoaham-baovao rehetra dia samy miresaka ny fiantraikany ratsy entin'izany ho an'ny fifandraisan'i Taiwan sy Etazonia. Ireo mpanao politika avy amin'ny lafiny roa, na izany avy amin'ny antoko mitondra , Kuomingtang (KMT) na ny mpanohitra, Democratic Progressive Party (DPP) dia samy miteny fa mila “henjana” ny governemanta Taiwanais amin'ny resaka fiandrianam-pirenena ka hangataka ny tsimatimanota ara-diplaomatka ho an'i Liu, na dia milaza aza ny lehiben'ny fampanoavana tao amin'ny NBC fa noho i Taiwan tsy firenena manana fiandrianana dia tsy afaka hisitraka izany zo izany i Liu.
Raha tsy hita loatra tanatin'ireo kabary politika ny zon'ilay mpiasa niharan'ny tsy rariny, ireo mpampiasa twitter kosa dia nisaina lalina momba ny fihetsiky ny Taiwanais manoloana ireo mpiasa vahiny mpila ravinahitra. Hoy i @ancorena :
Heveriko fa ao anatin'ny fisainan'ny olona maro, Etazonia dia sary maneho ny fenitra fanajàna zon'olombelona manerana ny tany. Saingy hatramin'ity fotoana ity aloha, mbola betsaka ny tokony hianaran'ny Taiwanais amin'ny rafitra lalàna ao Etazonia amin'ny fomba mendrika hitondràna tsara ireo vahiny mpitady ravinahitra. Tena zavatra kidaladala manahirana mihoatra noho izay azo faritana izy ity.
GJ!Taiwan, kaonty twitter iray fanelezana vaovao tsy marina dia mba niresaka koa ity tranga ity:
Araka ireo tatitra avy any ivelany, Hsien-Hsien Liu, tale jeneralin'ny Taipei Economic and Cultural Office ao an-tanànan'i Kansas , dia nampangain'ny mpiasa an-tranony avy any Philippine ho nanararaotra mpiasa sy nanao hosoka tamin'ny fanerena azy hiasa ankoatry ny ora ara-dalàna sy nanaràma azy tamin'ny 1/3 fotsiny amin'ny tokony ho karamany, ka dia nosamborin'ny FBI. Ny Minisitry ny Raharaham-Bahiny, Chin-tien Yang, dia nanamarina ny zava-nitranga sady naneho fanoherana miezinezina: Satria tsy nanao afa-tsy ny nanaraka ny fomba fanaon'ireo Taiwanais mpampiasa rehetra ihany i Liu, dia tokony hankato izany i Etazonia.
Torrent Pien dia manontany antsipirihany bebe kokoa mikasika ilay tranga:
Voalaza fa ilay vehivavy mpiasa an-tranon'i Liu dia noraisiny hiasa tamin'ny fomba ofisialy, saingy satria ny karama isam-bolana ao anaty fifanarahana dia $US 1240, raha $US 450 monja no noraisin'ilay mpiasa an-trano, nankaiza ny $790? Liu dia manan-tsafidy, ka na izy hanaiky fa nanakarama io olona io ho an'ny tombontsoany manokana, na izy hiaiky fa nanao kolikoly.
book686 manamarika hoe:
[Mikasika ny raharahan'ilay diplaomaty voasambotra] Hatramin'izao, ireo mpirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ihany aloha no nanisy tsindrim-peo mikasika ny raharaha fiandrianam-pirenen'i Taiwan, ary tsy misy na iray aza miresaka ny zon-olombelona (ho an'ny mpiasa)
Angel Smile miteny hoe:
Avelao i Etazonia no hanafay ny karazana lava-b…..toy izany; fa raha toa miverina aty amin-tsika ny fakofakon'olona toy io, na dia nanao kolikoly aza izy dia ho hafàhana madiodio ihany izy.
Winkai mahita hevitra iray :
Raha ny hevitro dia tokony hangataka onitra amin'ny fanjakana i Liu, avy amin'ny governemanta Taiwanais izay nandrisika ny vahoakany “hampiasa” fanararaotana amin'ireo vahiny mpila ravinahitra. Izany no antony isainan'i Liu fa tsy nanao ratsy, na inona na inona, izy.
Azonao atao ny mijery ireo tatitra tany aloha momba an'i Taiwan sy ny resaka asa fitadiavana eto, eto, ary eto. Fa izao koa, ireo vahiny mpiasa an-trano sy mpiasa ao Taiwan dia tsy manana zo hisitraka andro fialan-tsasatra izany mihitsy.